Prof. Cabdullahi Sheekh Ismaciil oo Diidan Siyaasada Hoose ee uu ku Shaqeynayo Col. Cabdullahi Yusuf
Buluugleey, Saturday, October 29, 2005
Danjire Cabdullahi sheikh ismaaciil ayaa soo gaaray magaalada Jowhar isaga oo soo raacay Prof. Geedi iyo Prof. Salim Caliyow si loo xaliyo khilaafka isaga iyo Col. Cabdullahi u dhexeeya.
Marar badan oo la isku dayey in danjire Cabdullahi uu yimaado Jowhar ayaan suurtogal noqon sababo la xiriira khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo Col. Cabdullahi Yusuf, kaas oo ku saleysan doorka C/risaaq Jurille oo garabka Jowhar u matala inta badan siyaasadooda iyo xiriirka ay la leeyihiin dibeda.
Danjire Cabdullahi oo ah raggii sida xun ay Itoobiya ugu adeegsatay dadaalkii lagu soo saarayey Col. Cabdullahi inuu hogaamiyo Soomaalida, ayaa hadda u muuqda qof laga maarmay, isaga oo lagu eedeeyey inuu amar diido ku sameeyey fariimo badan oo ka soo gaaray Col. Cabdullahi Yusuf.
Waxaa hadda loogu yeeray in dhibaatadiisa dhaqaale iyo deymankiisa wax badan laga qaban doono, laakiin taas meelmarinteedu waxey ku xiran tahay inuu ka haro eeda uu u hayo Cabdirisaaq Jurille oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba ah qasnada iyo maskaxda dhaqaajineysa garabka Jowhar.
C/llaahi Shiikh Ismaaciil ayaa ku adkeysanaya in laga siiyo faahfaahin qancisa sababta ay u dhacday in aan lagu soo wargelin safarada shirarka dibeda, gaar ahaan dalka Itoobiya iyo sababta keentay in isaga xiriirkaas lagu aamini waayo. Wuxuu ku dooday in taas ay u horseeday inu isaguna uu ka qaybgalo shirar uusan soo ogeysiin Col. Cabdullahi iyo inuu diido amaro lagu farayey inuu deg deg ku yimaado Magaalada Jowhar. Waxaa loo sheegay in amar diidada uu ku sameeyay Col. Cabdullahi looga tashan doono in xilka looga qaado iyo in kale, taas oo looga dan leeyahay in laga soo fujiyo meesha uu ku dhegan yahay iyo in mowqifkiisa la soo jilciyo, isaga oo ka dheregsan in Jowhar ay tahay meel ciddii timaada haddii sidii la rabo laga waayo loo taxaabayo xabsiga.